स्वतन्त्र पत्रकारीता की, मिसन जोर्नालिजम ?
“बेपत्ता डाक्टर माओबादी कब्जामा” चितवनका डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण काण्डमा माओबादी संलग्नता रहेको भन्दै केहि राष्ट्रिय अखबारहरुमा ब्यानर न्युज बन्यो । समाचार भाइरल बन्यो । आम जनताले कसरी नपत्याउने राष्ट्रिय मिडियामा आएको कुरालाई । तर यो कुराको पुष्टि हुन सकेन । कुरो त्यतिमा मात्र सिमित छैन । आजकाल संचार माध्यममा(चाहे अनलाइन हुन या छापा) यस्ता समाचारहरु आउन छोडेका छैनन । तर तिनको कुनै पुष्टि भएको थाहा छैन ।
पछिल्लो पटक माओबादीको १० बर्षे शसस्त्र जनयुद्ध र त्यसको जगमा २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनले नेपालको इतिहासमा एउटा कोर्ष पुरा गरेको हो । यस्तो परीवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा सायदैले कल्पना गरेका थिए । तर परीबर्तन भइ छाड्यो । पहिलाका बिद्रोहि र आन्दोेलनकारीहरु सत्ताका स्टेकहोल्डर भए । १७ बर्षे संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्रको कालखण्डमा पिल्सिएका जनता बिकास र संबृद्घि हुने कुरामा अशाबादी र उद्देलित भए जुन स्वभाबिक छ । तर, राजनितिक नेतृत्वले जनताको उत्कट अभिलाषा र चाहनालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा मुख्य बिषय गौण र गौण बिषय मुख्य बनेर बिगत १० बर्ष गुज्रिसकेका छन् ।
अझ २१ औं शताब्दिमा कुनै पनि मुलुकमा चौथो अंगको रुपमा रहेका संचारमाध्यमले प्रबाह गर्ने कुरालाई आम जनताले बिश्वास नगर्ने त कुरै भएन । डाक्टर भक्तमान अपहरण काण्ड, काठमाण्डौंमा समाजसेबी दिलशोभा श्रेष्ठलाई मानब तस्करीको आरोप, रामहरी श्रेष्ठ हत्या प्रकरण, पत्रकार डेकेन्द्र थापा मारीएको प्रकरण, कृष्ण सेन “ईच्छुक” हत्या प्रकरण, फुजेल घटना, मैना सुनुवार हत्या प्रकरण तथा राज्य पक्षले गराएका हजारौंको बेपत्ता तथा हत्या, तत्कालिन वनमन्त्री मात्रिका यादबले बनका कर्मचारी ट्वाईलेटमा थुनेको घटना, पशुपतिको पुजारी प्रकरण, कट्वाल प्रकरण, तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले बिजुलीको पोलमा चढेर आफैं बिद्युत लाइन काटेको समाचार, सांसदहरुको रातो पासपोर्ट काण्ड, पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले ल्याएको २१ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको कुरा, भारतीय नाकाबन्दीमा तत्कालिन प्रम ओलीको राष्ट्रबादी समाचार, माओबादीका ८ सांसदलाई मानब बेचबिखनको आरोप र हालका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका काम, अहिलेको सरकारले भरतलाई नेपालको काठमाण्डौ तराइ द्रुतमार्ग लगायत सबै योजना सुम्पिएको अपुष्ट समाचार नै किन नहोस यी सबै समाचर कुनै न कुनै रुपले राष्ट्रिय छापामा हट समाचार बनेर आए । तर, एकाध बाहेकका सकारात्मक समाचार ब्यानर न्युज बनेको थाहा पाईएन । कतिपय गम्भिर प्रकृतिका समाचार त पुष्टि नै भएनन् ।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा मारीएको आधा दशकपछि कोकोहोलो मच्चाउने मिडिया हाउस पत्रकार कृष्ण सेन मारीएको एक दशकसम्म कता सुतेका छन ? नन्द प्रसाद अधिकारीको चिहानमा बसेर डुक्रने मिडिया हाउस ४९ जना कैदी हत्याको बिषय किन बारम्बार उठाउन सक्दैनन ? प्रकृया गलत भए पनि तत्कालिन वनमन्त्री मात्रिका यादबले अटेर गर्ने बनका कर्मचारी ट्वाईलेटमा थुनेको घटना पछि बर्खास्त हुनु पर्यो । तर तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले कर्मचारी झैं बिजुलीको पोलमा चढेर आफैं बिद्युत लाइन काटेको समचारको ब्यानर न्युज बन्दै वाह वाह गर्ने मिडिया हाउस उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत महसुल नतिर्ने सबै ग्राहकको लाईन काट्न सुरु गर्दा नकारात्मक समाचार लेखेर उल्टाउन खोज्ने किन ?
निबर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिकासे र राष्ट्रबादी देख्ने मुलुक कब्जा गरेर बसेका मिडिया हाउस २०६५ सालमा पशुपति पुजारी प्रकरण र सेनापति प्रकरणमा ओली दिल्ली धाउँदा कहाँ थिए ? कार्य योजना बेगरका बतासे भाषणलाई बिकासे भन्दै प्रोपोगण्डा मच्चाउनुको साटो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजना, काठमाण्डौं तराइ द्रुतमार्ग लगायतका २१ वटा आयोजनाहरु प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री मातहातमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कसले अघिसारेको हो किन लेख्दैनन् मिडिया ? के ठूला मिडियाहरुले यी सब कुराहरु बिर्से कि थाहा पाएनन् । यी सब कुराहरु स्वतन्त्र पत्रकारीताको दायरामा पर्छन या मिसन जोर्नालिजम ?
यो स्तम्भकारको बुझाइमा स्वतन्त्र पत्रकारिता पेसा अँगाल्नेहरुका नजरमा सबै घटनाक्रमहरु समान हुन् र हुनुपर्दछ । पत्रकारले राम्रोलाई राम्रो र खरावलाई खराव भन्न सक्नुपर्दछ । कहिलेकाँही एउटै समाचारको कारणले समाज र राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति पनि पुग्दछ । पत्रकारको आवरणमा कतिपय राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रति वितृष्णा फैलाउने मिसन जोर्नालिजम बन्द गर्ने की ?